35 * 42 * 32 စင်တီမီတာ
2004 ခုနှစ်တွင် Foshan Weierxin Safe Co. , Ltd သည် Foshan Weierxin Safe Co. , Ltd သည်ကျယ်ပြန့်သောတံခါးများရှိကုန်သည်များနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဤထုတ်ကုန်များသည်ပရီမီယံအတန်းကုန်ကြမ်းနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများကိုလုပ်ခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်, စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း, ဤအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးစုံကိုအမျိုးမျိုးသောရှုထောင့်အမျိုးမျိုးဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပြီး0န်ဆောင်မှုလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်။
2. လက် သင်၏ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးကိုမပို့မီစစ်ဆေးပါသလား။
2. Awe, Rosh, FCC
OEM ပံ့ပိုးမှု& ODM ဝန်ဆောင်မှု။
* မီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက် - 120 မိနစ်* Lock: အီလက်ထရောနစ်ဒီဂျစ်တယ်သော့ခတ်* Handel:3ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ* အစိုင်အခဲသံမဏိသော့ခမ်း, အချင်း 30 မီလီမီတာ;* 360 ဒီဂရီပွင့်လင်းနှင့်အတူချောမွေ့သောတံခါးကိုစစ်ဆင်ရေး;* ဘေးထွက်အပေါ်တွင်လေးလံသောတိုင်သံမဏိပတ္တာ;* အတွင်းပိုင်းကမ်းလွန်ရေတိမ်စင်;အောက်ခြေရှိ Boade သေးသေးလေး,